Xog: Madaxweyne Farmaajo oo mamnuucay dhaqdhaqaaqa koontooyinka DF ee Bankiga Dhexe - Caasimada Online
Home Warar Xog: Madaxweyne Farmaajo oo mamnuucay dhaqdhaqaaqa koontooyinka DF ee Bankiga Dhexe
Xog: Madaxweyne Farmaajo oo mamnuucay dhaqdhaqaaqa koontooyinka DF ee Bankiga Dhexe
Muqdisho (Caasimada Online) – War goordhow nasoo gaaray ayaa sheegaya in si KMG ah loo hakiyay dhammaan dhaqdhaqaaqyada Koontooyinka Bangiga Dhexe ee qaar ka mid ah wasaaradaha iyo hay’adaha kale ee dowladda Soomaaliya.
Hakinta dhaqdhaqaaqa ayaa la sheegay in la faray Maamulka Bangiga Dhexe, kadib markii laga warhelay in maamulkii hore ay faarujinayaan Koontooyinka.
Amarka xanibaada ayaa la sheegay inuu lahaa Madaxweynaha cusub ee DFS Maxamed C/llaahi ”Farmaajo”, waxa uuna maamulka Bangiga faray in amarkaasi uu saameynaayo dhammaan Hay’addaha Dowladda Federaalka.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale hakiyay in Hay’adaha DFS ay akoono gaar ah ka sameystaan Shirkadaha xawaaladaha iyo Bankiyada gaarka, inta lagu gudajiro isbedelka Xafiisyada Dowlada.
Sido kale, amarkaasi ayaa shaqeyn doona ilaa iyo laga soo saaro amar danbe, maadaama Dalka uu ku jiro wakhti kala wareeg ah.
Dhinaca kale, amarkaani ayaa lagu xoojinayaa Hanaanka ay Dowlada Madaxweyne Farmaajo ku xakameyneyso Hantida ku harsan Koontooyinka.